Huawei Mate 10 Pro နဲ့ P10 ကိုပရိုမိုးရှင်းပြုလုပ် ရောင်းချနေပြီဖြစ်တဲ့ Three UK! – AsiaApps
February 7, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Huawei Mate 10 Pro နဲ့ P10 ကိုပရိုမိုးရှင်းပြုလုပ် ရောင်းချနေပြီဖြစ်တဲ့ Three UK!
Three UK ဟာတော့ UK မှာရှိတဲ့ Mobile telecommunications ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး Huawei Mate 10 Pro နဲ့ P10 တို့ကို ပရိုမိုးရှင်းပြုလုပ်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Mate 10 Pro (သို့) P10 တစ်လုံးကိုဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ Tablet တစ်လုံးကိုလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်သလို Pound 100 လည်းပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ရရှိမယ့် Tablet ကတော့ Huawei MediaPad T3 7.0 ဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းက Pound 80 လောက်တန်ပါတယ်။
ဒီ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ လစဉ်ကြေးနဲ့ဝယ်ယူမှသာခံစားခွင့်ရှိမှာပါ။ Mate 10 Pro ကို တစ်လ 31 Pound, P10 ကို တစ်လ 26 Pound နဲ့ ၂၄ လပြတ်ဝယ်ယူရမယ့်အစီအစဉ်မှာပါဝင်မှသာ ပရိုမိုရှင်းကိုခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်ပဲဖြစ်တာကြောင့် မတ်လဆန်းပိုင်းလောက်မှာ အကျုံးမဝင်တော့ပါဘူး။
အကယ်၍မိတ်ဆွေက UK မှာနေထိုင်ပြီး Huawei ရဲ့ High-end အမျိုးအစားဖုန်းဝယ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီသတင်းဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါပဲ။ Tablet သာမက Pound 100 လည်းပြန်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဝယ်သူတွေသရေယိုမယ့် အစီအစဉ်လို့ဆိုရမှာပါ။ မတ်လအစပိုင်းလောက်ဆိုရင်အကျုံးမဝင်တော့တာကြောင့် လက်မနှေးကြဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Three UK ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းစတင်တည်ထောင်ထားပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
1 Pound = 1.4 US
GrabaHuawei Mate 10 Pro or P10 from Three UK and getafree tablet and £100 cashback https://t.co/TTv2qsUFe3 pic.twitter.com/cU9ytJ6CpJ